ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏နံရံအတွင်းအပြင်တည်ရှိပြီး, ဗာတီကန်စီးတီး, စိန့်ပေတရု၏ Basilica ခြောလူ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးဗိသုကာ၏ Feat နဲ့အနုပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်. အခုတော့တစ်ဦး အဓိကဆွဲဆောင်မှု ကားပုံ 10 သန်းဧည့်သည်တစ်နှစ်, ဒီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စိန့်ပေတရု၏ရင်ပြင်လျစ်လျူရှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝါကြွားသမိုင်းဝင်အနုပညာတစ်ခုခမ်းနားထည်ဝါပေါင်းစပ်, စကျင်ကျောက်ကော်လံများ, Michelangelo မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအထင်ကရ mosaic-lined dome (အရာသည်သင်တို့အထိပ်ကိုတက်နိုင်ပါတယ်, သင်အပေါ်ယူဝံ့သင့်တယ် 491 လမ်းတစ်လျှောက်ခြေလှမ်းများ!).
တူရကီရဲ့ Transcontinental မွို့၌တည်ရှိသည်, အစ္စတန်ဘူလ်, အဆိုပါ Sultan Ahmed ကဗလီလေ့ရှိသောကြောင့်ယင်း၏မူထူးခြားတဲ့အပြာရောင်အတွင်းပိုင်း၏အပြာရောင်ဗလီအဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်. အကြားအော်တိုမန် Sultan Ahmed ကငါကတည်ဆောက် 1609 နှင့် 1616, ဒီအထင်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံမှာအဓိကခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ဝတ်ပြုမှုတစ်ခုတက်ကြွသောအရပ်နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ပြုမူ, ဗလီငါးပါးနေ့စဉ်ဆုတောင်းချက်တွေကိုစဉ်အတွင်း Non-ကိုးကှယျသူမှပိတ်ထားသည်အဓိပ္ပာယ် – ဆုတောင်းချိန်များကိုဤနေရာတွင်စစ်ဆေးနိုင်သည် သငျသညျခရီးစဉ်မတိုင်မီ.
အားလုံးဧည့်သည်ဗလီမဝင်ခင်လိုက်နာရမယ်တဲ့တင်းကြပ်စားဆင်ယင်ကုဒ်ရှိပါတယ်. ပထမဦးစွာ, ဖိနပ်တာဝန်ခံ၏ဗလီအခမဲ့ပေးကြည်လင်သောပလပ်စတစ်အိတ်အတွင်းဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ထားရှိရပါမည် – သငျသညျထို့နောက်အခန်းကျအပေါက်၌သင်တို့၏ဖိနပ်စွန့်ခွာရန်အ option ရှိသည်သို့မဟုတ်သင်နှင့်အတူအိတ်သယ်ဆောင်. အခါသင့်ရဲ့အဝတ်အစားမှကြွလာ, ယောက်ျားချောင်အဝတ်အဘို့အရွေးချယ်နှင့်၎င်းတို့၏ခြေထောက်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်သေချာသင့်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောအင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီတိုအဖြစ်ကိုရှောင်ရှားပစ္စည်းများ. အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏လက်မောင်းကိုသေချာထိန်းထားသည့်အခါချောင်ချောင်ကျသောအ ၀ တ်များ ၀ တ်သင့်သည်, ခြေထောက်, နှင့်ဆံပင်အားလုံးအချက်များမှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်. အမြိုးသမီးမြားလာသောအခါအတွင်း၌တစ်ပုဝါဝတ်ဆင်ရန်မျှော်လင့်ထားကြသည်သောဤနည်းလမ်းများနှင့်, ဒီအများကြီးမဟုတ်သောမွတ်စလင်အနောက်တိုင်းဧည့်သည်များအတွက်အသစ်တစ်ခုအယူအဆဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်, ကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ် ဘယ်လောက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဒီကျိုးနွံအဝတ်အစားမရှိမဖြစ်ဝတ်ဆင်ရန် သငျသညျခရီးသွားမတိုင်မီ.
19 ရာစုကတည်းက churchgoers နှင့်ဧည့်သည်များမှပွင့်လင်း, သငျသညျလက်ခံတွေ့ဆုံအဆိုပါ Sagrada Familia Basilica 4.5 သန်းဧည့်သည်များနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းယခုရလဒ်ကဲ့သို့လက်မှတ် entry ကို system ကိုလည်ပတ် – these are available to buy online up to two months before the date of your visit. တို့အတွက်လျှော့ချတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်သတ်မှတ် entry ကိုကြိမ်ပေါ်ဤအကြောင်းလက်မှတ်တွေအလုပ်, သို့သော်, သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အထင်ကြီးအတွင်းပိုင်းတွေရဲ့ရန်ချင်ပါတယ်အဖြစ်ဖြုန်းဖို့သငျသညျအထဲမှာနေအခမဲ့အနေဖြင့်တစ်ချိန်က. ကျနော်တို့အနည်းဆုံးခွင့်ပြုအကြံပြု2စနစ်တကျဒီဗိသုကာအံ့သြစရာအတွက်ယူနာရီ. အသင်းတော်ဝန်ဆောင်မှုတက်ရောက်ရန်ရှာဖွေနေဧည့်သည်များအတွက်, အစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုင်းစနေနေ့နင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမနက်9နာရီမှာကျင်းပနှင့်ည 8 နာရီမှာဖြစ်ပါတယ်, ရေရှည်တည်တံ့ 1 အတော်ကြာဘာသာစကားများကောက်ယူနာရီနှင့်ဖြစ်လျက်ရှိ.
ဥရောပအများအပြားမှနေရာဖြစ်သည် လှပသောသောနေရာများ အမှန်ဗိသုကာများ၏ပြိုင်ဘက်ကင်းတန်ခိုးနှင့်ဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှု encapsulate ကြောင်းဝတ်ပြုမှု. ထိုအစက်အပြောက်ဦးပထမဦးဆုံးလက်တွေ့မြင်မှ, ရထားအားဖြင့်တိုက်ကြီးခရီးသွားလာခြင်းနှင့် အတူစာအုပ် တစ်ဦးကရထား Save ဥရောပရဲ့အများအပြားမြင်ကွင်းများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုဖြတ်ပြီး upturned မျှကျောက်ကိုမချန်ထားရန်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “3 ကိုးကွယ်မှု၏ဥရောပရဲ့ရမညျ-ကြည့်ရှုနေရာများ၏” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/europe-places-worship/?lang=my ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
LaSagradaFamilia ဗလီ ရထားခရီးသွား traveltips ဆေးရုံ ကိုးကွယ်ခြင်း
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ